Seminaaradii wacyigalinta ardayda oo ka bilowday Muqdisho.
Waxaa lagu qabtay xarunta Ibnu Baaz ee dacwada iyo hanuuninta ee magaalada Muqdisho maanta oo ah 13/06/2004 xafladdii furitaanka Seminaar socon doona laba toddobaad oo lagu wacyigalinayo gabdhaha dugsiyada sare ee wax ka barta Muqdisho iyo agagaarkeeda. Xafaladdaan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf ka socota dalladda culimada, xariirka ardayda Soomaaliyeed ee caalamiga ah, jaamacadda islaamiga ah, maamulka xarunta Ibnu baaz , macallimiinta Seminaarka wax ka dhigi doonta, waalidiinta, ardayda, warbaahinta Muqdisho iyo marti sharaf kale. Waxaa halkaa hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda waxayna u mahadceliyeen una duceeyeen dadkii suuragaliyay Rabbi ka dib qabashada Seminaarradaan iyagoo sheegay in ay bixisay kharashaka dawradaan gabar deggan Xamar, waxay kale oo la xusay in la qaban doono Seminaarro kale oo ay ku wada tabarruceen dadwaynaha Soomaaliyeed rag iyo dumarba.
Duruusta lagu qaadan doono Seminaarkaas waxaa ka mid ah: Ahmiyadda Tawxiidka, Tilmaamaha Ahlusunnaha, Gabdhaha islaamka, Tilmaamaha Jannada iyo Naarta, Humuumta gabdhaha, Raacista nabiga, Xirfadaha wax akhriska, fakarka toosan iyo hal abuurka, Xijaabku waa calaamadda dhawrsanaanta, Dahaarada, Salaadda, Ahmiyadda guurka iyo waxyaabaha la xiriira, ilaalinta sharafta, cadawga iyo sokeeyaha, walaalnimada islaamka, Kaalinta warbaahintu ku leedahay samaynta afkaarta, cilmi barashada iyo Aadaabta telefoonka.
Ugu dambayntii waxaa usbuucaan iyo kan ku xiga la furi doonaa seddex dawro oo wiilal ah, haddii Rabbi idmo.